Nechokumusoro kweEurope iparadhiso yechokwadi, asi nzvimbo dzakawanda dzinoshanyira vatasviki uye boka revanhu vanokwidza munguva yepamusoro yechando ndicho chinhu chandinovenga zvachose. Himachal yakanga iri nzvimbo yandinoda kugara ndichiongorora; bhuku rangu remakabhedhi raisazova rakakodzera pasina nzvimbo yakanaka kudaro. Sezvo ndakagara pasi ndikaongorora nzvimbo dzose, ndakasarudza kutsvaga asina kudzidza uye asina kutora Himachal. Ichi Offbeat Akavanzwa Himachal Tour akandipa goosebumps (nenzira yakanaka) sezvandakanga ndichifamba mumakomo asina chaipo uye ndine ruzivo rucharamba ruri pedyo nemwoyo wangu, nguva dzose. Heanoi Zvikonzero zveCNUMX Zvaunofanirwa Kutora Nechipfuva Chakavanzwa Himachal Tour.
Zvakanaka, zvinhu zvokutanga kutanga. Kutsvaga Himachal munguva yepamusoro, neboka rinoshungurudza nevana vakachema, kwete rwendo rwakanaka kwandiri. Saka, ndakasarudza kuenda pane imwe nzvimbo ndaigona kufema uye kunzwa Heachal. Malana iri musha muduku wakavanzwa kubva kune vanhu vakawanda vanonyanyisa vepasi rose, vakarara murugare muruwa rweKullu rweHitachal Pradesh. Ndinofanira kuziva kuti ndechimwe chezvidhori zvekare kare, zvisati zvasarudzwa nezvino. Ichokwadi, nzvimbo ino ine mitemo yake yemitemo yekuita uye miitiro inofanana zvikuru neyechiGiriki yehutungamiri hwehurumende, mutauro, hutano hwevanhu uye pfungwa yavo yekuchena. Zvinyorwa zviduku zvakange zvakanaka kwazvo uye nzvimbo yakange iri nerunyararo.
Izvo zvakasvibirira uye zvitsvuku kusanganiswa kwemasango nemakomo echando-akapfeka zvakandipa marudzi ose ekunzwa. Kalpa, imwe yemaguta makuru eKinnaur, inonyanya kuzivikanwa nemasango ayo ane miti yakaoma yepaini pine uye nzvimbo inonakidza iyo Kinnaur Kailash yakavharwa nechando iyo inorwisana nayo pavanenge vashamba mangwanani. Inonyanya kuzivikanwa neApple minda yemichero, iyo inowedzera kuwedzera ruvara rwemavara kune ruvara uye ruvara pamwe chete. Yakapoteredzwa sechinhu chakavezwa, nzvimbo iyi yakatora mweya wangu.
Ndakanzwa nenzira iyi, kuti ndinoyeuchidza nezvehuduku hwangu. Handina kumbofunga, kutamba zvakanaka mabhodhi ekare ebhodheni nevasingazivi zvaigona kuva izvi zvinonakidza uye zvingondipa Deja vu! Nditendesei varume, izvi zvakaitika kune zvakakosha. Nzvimbo yacho inotakurwa nemakamuri uye mapoka emisangano uye vanhu vane ushamwari. Kutamba Carrom neboka revadzidzi vekusekondari muJim Morrison cafe chaive chiitiko chandisingambokanganwi.
4.Musha umo India inopera.
Chitkul inzvimbo duku muKinnaur district yeHitachal Pradesh, yakasvibiswa isina kukanganiswa pamuganhu weIndo-Tibetan. Zvinoshamisa kuti ndiro ndiro rekupedzisira raigara mumuganhu uye nzvimbo yekupedzisira muIndia inogona kutenderera kuenda pasina kudiwa kwemvumo. Zvaiva zvemashiripiti. Mhedziso yokuti, ndiri kumucheto kweIndia, ndimire apo migwagwa yeIndia yapera yaive chiitiko chehupenyu hwose. Makomo echando, zvakasvibirira zvinomera, minda yemasitadhi nemichero yemichero yemapuro ndiyo inokosha ye Chitkul. Ngwarira pamusoro pemamiriro ekunze asi, mazhizha pano ane utsinye, saka peta zvakakodzera.
Handikwanise kukanganwa mavara ezvinyoro zvandaiva nazvo, anonzi Bhey, mumutauro wekune imwe nyika, ndeimwe yevakakurumbira uye vanofarira kudya mumba maHeachal. Mittha ndeimwe yezvokudya zvakanakisisa zvandaiva nazvo. Iwe unofanidza kuedza Dham, chikafu chechidimbu chakagadzirwa neBrahmins, panguva yemitambo. Iyo inowanzoshandiswa pane mahwendefa akaitwa mashizha.
Hidden Himachal Tour inogona kunzwiwa chete kana iwe uchienda ikoko uri munhu uye unogadzira zvimedu zvizere nezviyeuchidzo zvinokosha.